“Gooni-isu-taagga Somaliland ka weyn tahay wax lagu miisaamo madal salaameed dhawr qof ku kulmeen | Salaan Media
“Gooni-isu-taagga Somaliland ka weyn tahay wax lagu miisaamo madal salaameed dhawr qof ku kulmeen
“Gooni-isu-taagga Somaliland ka weyn tahay wax lagu miisaamo madal salaameed dhawr qof ku kulmeen”
Hargeysa (Sm)- Murrashaxa Madaxweynaha ee xisbiga UCID Mudane Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay kulankii Sabtidii la soo dhaafay dalka Ingiriiska ay ku kulmeen Guddoomuiyaha UCID iyo Madaxweynaha Soomaaliya, waxaanu kulankaasi ku sifeeyay kulan salaameed aan lagu miisaami karin qadiyadda gooni isku taaga Somaliland.
Jamaal Cali Xuseen waxa uu sheegay in xukuumaddu aanay ka hadal markii sida uu ku dooday madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay hadalo burin kara qodobka 7-aad ee heshiiskii lagu gaadhay dalka Turkiga.
Murashaxa madaxweynaha UCID, waxa uu sidaasi ku sheegay war-saxaafadeed uu caawa London ka soo saaray oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay shabakada wararka ee Somaliland.Org, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Waxa maalmahan dambe aad carrabka loogu hayaa oo wejiyo badan yeeshay kulan-salaameed magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ay ku wada yeesheen Guddoomiyaha xisbiga Ucid, Eng Faysal Cali Waraabe iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka mid ah wasiirrada dawladda Soomaaliya, kulankaasoo dhacay Jimcihii ina soo dhaafay ee bishan May 10keedii.
Xisbiga UCID, isaga oo si daymo fog iyo miisaanba leh u aaminsan qaddiyadda gooni-isu-taagga Jamhuuriyadda Somaliland, wax qorgortan ahna aan gelinayn haba yaraato’e habraaca, mabaadida iyo siyaasadda qaddiyaddaasi salka ku hayso, ayaa waxa aan halkan ku caddaynayaa aragtida xisbiga Ucid ee ku waajahan kulankaas salaanta ahaa.
Waxa aanu guud ahaan shacabka Somaliland, gaar ahaanna taageerayaasha xisbiga UCID u iftiiminayaa in kulankaasi ahaa arrin u gaar ah Eng. Faysal Cali Waraabe oo aanu ku wehelin xisbiga UCID ogaansho iyo ka-qaybgal ahaan; dooc iyo dareen toonna. Manuu ahayn kulankani mid si rasmi ah u dhex maray xisbiga Ucid iyo mas’uuliyiinta sare ee dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya Sir iyo caadba, wax se uu kulanku ahaa mid Faysal Cali Waraabe oo keliya ku kooban. In kasta oo ay taasi jirto, haddana xisbigga UCID marnaba kama shaki qabo halka uu guddoomiye Faysal qaddiyadda Somaliland ka taagan yahay.
Iftiimintaas ka dib, waxa aan cod togan ugu sheegayaa xukuumadda Somaliland in ay ka waantowdo buunbuuninta iyo ka-badbadinta dhacdooyinka yaryar iyo iska indhosaabka ama daahsaarka in ay ka hadasho arrimaha waaweyn ee ka midka ah waxyaalihii loo igmaday ee xilka iyo waajibaad gudashadeedu ku suntanaayeen.
Xukuumadda Somaliland may soo hadal qaadin, waxna kama aanay odhan markii uu madaxweynaha Soomaaliya si cad u buriyey qodobkii 7aad ee Axdigii Ankara ee shirkii Turkiga ee labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya kaga heshiiyeen in laga fogaado wixii xanaf iyo hurgumo ku abuuri kara geeddi-socodka wada hadallada labada dhinac. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safarkiisii dhowaa ee Ingiriiska uu ku yimi kaga tibaax bixiyey inuu madaxweyne u yahay Soomaaliya inta u dhaxaysa Raas Kaanboodi ilaa Raas Casayr iyo Saylac! Dhawaqaas taban ee madaxweynaha Soomaaliya ka soo yeedhayi waxa uu jebinayaa qodobkaas 7aad, xukuumadda Somalilandna dibnaha ayay ka daboolatay oo waxbana kama ay soo qaadin. Waxaannu fileynay in xukuumaddu ay hadalkaasi ka jawaabto iyada oo difaacaysa qaddiyadda Somaliland.
Sidaas awgeed, baannu muddarro u aragnaa in wax yar la koolkooliyo, wixii waynaana dhabarka loo sii jeediyo. Kulankan sida fiinta uga qaylisiiyey xukuumadda Somaliland oo ahaa mid salaan ahaa sidaannu caddaynay, gaarna u dhex maray Faysal Cali Waraabe iyo madaxweyne Xasan Sheekh, uma aragno in wakhti badan lagu lumiyo oo uu hadheeyo waxyaalaha ka mudan, kana muhiimsan ee xukuumad ahaan horyaalla ee gude iyo dibadba ciirciiraya, una baahan in wax laga qabto oo wakhti iyo dedaalba la geliyo; halkii wax kale ama “riyo iyo nifaaq” lagaga foognaan lahaa!
Ugu dambayn, waxa aannu shacbigayaga mar kale u caddaynaynaa badheedhahayaga oo ah in qaddiyadda gooni-isu-taagga Somaliland ka weyn tahay wax lagu miisaamo madal salaameed ay qof ama dhawr qofi ku kulmeen iyo wax ay shakhsiyaad go’aan ka gaadhi karaan toonna. Dastuur, goleyaal, axsaab qaran, ciidan, iyo shacbi u darban baanay leedahay qaddiyadda Somaliland oo gaadh ka haya ninkii moogganow; sidaas sahlanna dabaylaha iyo duufaannadu uma ruxi karaan ee ha lagu biyo cabbo.
Mida kale waxa uu xisbigga UCID dhamaantood meel kastoo ay joogaanba tacsi u dirayaan eheladdii dadkii ku geeriyoodday nasiibdaraddii shalay Burco ka dhacday, waxaananu aad uga xun nahay inay dad inagaga dhintaan arrin si fudud loo dhameyn karaayey. Dawladdana waxaanu ugu baaqaynaa inay dadka u naxariisato oo aanay u adeegsan xabad, dadkeeddana u yeelato dul-qaad isticmaashana agabka loo adeegsaddo mudaharaadyadda.”